लामो समय मास्क लगाउँदा आउने समस्या के हुन्? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार राष्ट्रिय समाचार लामो समय मास्क लगाउँदा आउने समस्या के हुन्?
लामो समय मास्क लगाउँदा आउने समस्या के हुन्?
मास्कले कोरोना संक्रमण फैलिनबाट जोगाउँछ भन्ने वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ। मास्क लगाउनेले आफू र आसपासका अरूलाई पनि संक्रमण फैलन नदिन सहयोग पुर्‍याउँछ। कोरोना महामारीभन्दा अगाडि दैनिक र लामो समयसम्म कहिल्यै मास्क नलगाएकाहरूले मास्क लगाउँदा केही अप्ठ्यारो हुने बताउँछन्। उनीहरूका अप्ठ्यारा सामान्यतया यस्ता हुन्छन्ः
मास्क लगाएको केही छिनमै टाउको भारी भएजस्तो हुन्छ
मास्क लगाएपछि सास फेर्न अलि कठिन भएजस्तो हुन्छ
मास्क लगाएपछि नाकबाट भन्दा मुखबाट सास फेर्न सजिलो लाग्छ र मास्कभित्र मुख प्राय: आँ नै भएर बस्छ
मास्कको तुनाले कान दुखाउँछ
लामो समय मास्क लगाउँदा आइपर्ने दन्त/मुख स्वास्थ्य समस्यालाई ‘मास्क माउथ सिन्ड्रोम’ भनिन्छ। अहिले यो जल्दोबल्दो समस्या बनेको छ र दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा निकै चर्चा हुन थालेको छ। कोभिड महामारी क्रममा मास्क माउथ सिन्ड्रोमको समस्या लिएर आउने वा समस्याबारे जान्न खोज्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
मास्क माउथ सिन्ड्रोमका असर के-के हुन्?
सास फेर्ने तरिकामा फरक आउनु:
अध्ययनले देखाएको छ, मास्क लगाएपछि मानिसको श्वासप्रश्वासमा केही परिवर्तन हुन सक्छ। छिटो-छिटो सास तान्न मन लाग्नुका साथै सास फेर्न नाकको सट्टा मुख प्रयोग हुन सक्छ। मुखबाट सास फेर्दा थुकको मात्रा कम हुन जान्छ। मुख सुख्खा भएर भित्रको वातावरणमा असर गर्छ। भित्र मिलेर बसेका जीवाणुको संख्या तलमाथि भई हानिकारक जीवाणुले बढ्ने मौका पाउँछ।
हावाको पुन: प्रयोग:
मास्क लगाउँदा हामीले फ्याँकेको सास सजिलै बाहिर जाँदैन। त्यो कार्बन-डाइअक्साइडयुक्त हावा मास्कभित्रै गुम्सिएर बस्छ। हुन त यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई खासै असर गर्दैन। तर यसले मुखको अम्लीयपन अलि बढाइदिन्छ। हामीले फेरेको तातो सास मास्कभित्रै रहनाले मास्कले ढाकेको ठाउँ ओसिलो हुन्छ र यो ब्याक्टेरिया संख्या बढाउन राम्रो वातावरण बनिदिन्छ।
मास्क माउथ सिन्ड्रोमका प्रमुख लक्षण के-के हुन सक्छन्?
मास्क माउथ सिन्ड्रोमका लक्षण व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ। माथि उल्लिखित कारण र व्यक्तिको शारीरिक क्षमतामा पनि भर पर्छ। केही सामान्य समस्या निम्न छन्:
मुख सुख्खा हुनु:
यो प्राय: मुखमा थुक वा र्‍यालको कमीले हुन्छ। यसरी सुख्खा हुँदा हामीलाई मुख खोल्न, बोल्न, खान र निल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। यो समस्या लामो समय रहे दाँतमा कीरा लाग्नुका साथै मुखभित्र घाउ, खटिरा र संक्रमण देखिन सक्छ।
गिजा सुन्निनु / गिजाबाट रगत आउनु:
ओठ फुट्नु वा ओठको कुनामा घाउ आउनु:
मास्क माउथ सिन्ड्रोमबाट बच्ने वा कम गर्ने उपायहरू निम्न छन्:
१. सफा मास्क लगाउने:
३. दन्त स्वास्थ्यको विशेष हेरचाह गर्ने:
– मनतातो नुनपानी वा चिनी/अल्कोहल नभएको माउथ वासले कम्तीमा दिनको एकपटक मुख राम्ररी कुल्ला गर्ने
४. दाँत र गिजामा विशेष ध्यान दिने:
५. पानी र अन्य झोल पदार्थ प्रशस्त पिउने:
६. खानामा भिटामिन सीको मात्रा बढाउने:
माथि उल्लिखित घरेलु उपायले समस्या समाधान नभए दन्त चिकित्सक वा सेवाकर्मीसँग सुझाव-सल्लाह लिनुपर्छ। हाल निषेधाज्ञामा आफ्ना चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न मुश्किल हुने भएकाले नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले आफ्ना दन्त चिकित्सकहरूद्वारा नि:शुल्क सल्लाह दिने व्यवस्था मिलाएको छ। एसोसिएसनको पैसा नलाग्ने नम्बर १६६००१०२२२३ मा सम्पर्क गरी आवश्यक सुझाव लिन सकिन्छ। Source: setopati.com
(डाक्टर कोइराला नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने
श्रीमती र छोरालाई विष सेवन गराएपछि..